Odisha Booqashada Honeymoon | Booqo xeebaha quruxda badan iyo harooyinka quruxda badan
Orissa, meesha Rabbi Jagannad ugu yeedhay dhowaan guursaday inay timaaddo oo ay ku dhacdo racfaan. Odisha Booqashooyinka Honeymoon waxay kugu qaadataa Baybalka Bengal ee ku yaala hudheelka joogtada ah ee golaha degaanka. Qaybta ugu weyn ee Orissa waxay ka kooban tahay xeebaha kala duwan ee quruxda badan ee Orissa mid ka mid ah masaafo waxtarka ugu fiican. Maxay noqon kartaa habka ugu fiican ee lagu jecel yahay jacaylka iyo jaaliyada laba qof oo kale marka loo eego dhacdooyinka asaasiga ah ee Orissa? Cimilada jacaylka ah iyo muuqaalka quruxda badan ee meeshan ayaa ku ammaani doona jilitaanka dabaaldegaada. Waxaad booqan kartaa dhibcaha fasaxyada aadka u fiican isla markaana aad uga mahadcelinaysid waqtiga tayada leh ee aad la jaanqaadi karto safarrada Orissa ee xaraashka ah oo la heli karo on sanduuqa cagaaran.
Diyaarinta khibradda ugu muhiimsan, booqashada munaasabadaha Omana badanaa waxay ku dhex jirtaa meelo fara badan oo u dhow agagaarka xeebaha, quruxda quruxda badan iyo muraayadaha caalamiga ah ee caanka ah. Iyada oo munaasabada dheeraadka ah iyo tixgelinta xaraashka ah, waxaanu hubineynaa dib u soo noqoshada jacaylka iyo jacaylka ah ee loogu talagalay dadka kaliya. Marka aad fursad u hesho inaad raadiso dhibcood si aad u bilowdo bilow fiican, markaa waxaanu haysanaa bakhaaro dalxiis oo bilaash ah si loogu bixiyo. Odisha Honeymoon Tours waxay u egtahay Sandbirdhada Sandbalka inay noqdaan kuwa ugu fiican ee iftiiminta iftiinka. Booqashooyinka ugu horreeya ee habeenkii ah ayaa ku siin doona fasax jinsi ah oo aad u baahato ka dib markaan la yiraahdo shenanigans ee arooska. Tani waa mid ka mid ah baxsigaan oo aad ka faa'iideysan doonto wax kasta oo aad ka tagtay oo aad qiyaasi kartid. Waa fursad gaar ah si aad u hesho waqti fiican iyo si ay u adkeeyaan dammaanadda iyo sharafta isdhexgalka.
Chilika oo leh saddexagal dahab ah Odisha
Xeebaha badda ee Odisha